6 ခုနှစ်တွင်ကိုပင်ဟေဂင်အတွက်အကောင်းဆုံးဟိုတယ် 2021 | ခရီးသွားသတင်း
ကိုပင်ဟေဂင်ရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၆ လုံး
Lola curiel | | ဒိန်းမတ်, ယေဘုယျ
Copenhague သည်ဒိန်းမတ်တွင်လူသိအများဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏လမ်းများနှင့်ပမာဏ၏ရှူသောလေထု ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အစီအစဉ်များ အားလပ်ရက်တွင်ရက်အနည်းငယ်သုံးရန်ဒိန်းမတ်မြို့တော်ကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေပါ။ သို့သော်များသောအားဖြင့်အခြားမြို့ကြီးများသို့မကြာခဏသွားလေ့ရှိပြီး၊ ဗဟိုနှင့်သိပ်မဝေးသောစျေးပေါသောဟိုတယ်ကိုရှာပါ ဒါကအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ် ထို့ကြောင့်၊ ကျွန်တော်တို့ကိုကိုပင်ဟေဂင်ရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၆ ခုစာရင်းကိုသင့်အားပေးပါတယ်။ အဲ့ဒါကမြို့လယ်ခေါင်နဲ့နီးပြီးစျေးပေါတဲ့တည်းခိုခန်းများဖြစ်သည်။
1 ဟိုတယ် CitizenM ကိုပင်ဟေဂင် Radhuspladsen
3 CityHub ကိုပင်ဟေဂင်
4 Aperon တိုက်ခန်းဟိုတယ်
5 အဆိုပါ Wakeup ကိုပင်ဟေဂင် - Bernstorffsgade
6 Brøchnerဟိုတယ်များမှဟိုတယ် Ottilia
ဟိုတယ် CitizenM ကိုပင်ဟေဂင် Radhuspladsen
သင်ကကိုပင်ဟေဂင်၏ဗဟိုအနီးရှိအရည်အသွေးနှင့်ဟိုတယ်များကိုရှာဖွေနေလျှင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ တည်နေရာ မြို့အလယ်၌, ဟိုတယ် CitizenM Copenhagen Radhuspladsen သည်သက်သောင့်သက်သာရှိသောစျေးနှုန်းဖြင့်သက်သာမှုကိုသင်ရှာဖွေနေပါကအလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကိုပင်ဟေဂင်သည်စျေးပေါသောမြို့မဟုတ်ကြောင်းသတိရပါ။ သို့သော်ကြယ် ၄ ပွင့်ဟိုတယ်အတွက်ဤဟိုတယ်အတွက်နှုန်းမှာအတော်အတန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပြီးမနက်စာတွင်ပါဝင်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ၎င်း၏တည်နေရာစံပြဖြစ်ပါတယ် သငျသညျသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်အချိန်အများကြီးဖြုန်းစရာမလိုဘဲ sightseeing သွားချင်လျှင်။ ဟိုတယ်သည်ဥရောပရှိရှေးအကျဆုံးအပန်းဖြေဥယျာဉ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည့် Tivoli Gardens မှမီတာ ၆၀၀ အကွာတွင်တည်ရှိပြီးထိုမြို့သည်သင်၏လည်ပတ်မှု၏အဓိကအချက်များဖြစ်မည်မှာသေချာသည်။
ခြော, အကောင်းဆုံး CitizenM Copenhagen Radhuspladsen သည်၎င်း၏ခေတ်မီ။ ရောင်စုံသောအလှဆင်မှုဖြစ်သည် ယင်းက visitors ည့်သည်များကိုဒိန်းမတ်အနုပညာနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေသည်. ခရီးသွားခြင်းသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နှင့်အဆက်ဖြတ်ရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ခရီးသွားသည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်သောအရာများကိုလေ့လာရန်နှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အဆက်အသွယ်ရရန်ကြိုးစားသည်။ ဒီဟိုတယ်ရဲ့နံရံ သူတို့ကိုဒိန်းမတ်အနုပညာရှင်တွေရဲ့ပန်းချီကားများနှင့်ပန်းချီကားများဖြင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည်။ ထို့ကြောင့် guests ည့်သည်များနေခြင်းသည်ဒိန်းမတ်၏ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းပိုမိုလေ့လာရန်ခွင့်ပြုသည့်အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။
သင်သည်ကိုပင်ဟေဂင်ရှိညစျေးပေါသည့်ဟိုတယ်များကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါစို့။ Generator Copenhagen သည်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည် လူငယ်များ အဘယ်သူသည် conviviality နှင့်ပျော်စရာအဘို့အဒီဇိုင်းအရပ်ဌာန၌နေရန်လိုသည်။ အမိုးအကာ ညမှာအရမ်းကောင်းတယ် ပွဲများ၊ ကာရာအိုကေနှင့် DJ ဖျော်ဖြေပွဲများကိုစီစဉ်ကျင်းပသောအခါကော့တေးလ်၊ အခြားခရီးသွားများနှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကောင်းသောဂီတကိုခံစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိပ်ရန်သာမကနေရာတ ၀ ိုက်၌ဘဝများစွာဖန်တီးနိုင်သည်။
သို့သော်သင်ထွက်သွားရန်၊ လမ်းလျှောက်ရန်နှင့်မြို့ကိုသိလိုပါကဤနေရာသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Kongens Nytorv မက်ထရိုဘူတာမှ ၇ မိနစ်သာတွင်တည်ရှိပြီးအလွန်နီးကပ်သောနေရာဖြစ်သည် Frederiks Kirke (စကျင်ကျောက်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း) နှင့် Amalienborg နန်းတော်, မြို့တော်သို့သင်၏လည်ပတ်မှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
စျေးအချိုဆုံးအခန်းများကိုဝေမျှကြသည် အကယ်၍ သင်သည်ဤကဲ့သို့သောဘော်ဒါဆောင်များတွင်မသုံးပါကပြaနာဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ ပိုမိုလုံခြုံမှုရှိရန်လိုအပ်သောသူများအတွက်ဘော်ဒါဆောင် ထို့အပြင်ပုဂ္ဂလိကအခန်းများကြိုတင်မှာကြားထား၏ဖြစ်နိုင်ခြေပေးထားပါတယ်။ Generator ကိုပင်ဟေဂင်၏နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည် reception ည့်ခံကို ၂၄ နာရီဖွင့်ထားတယ်။ ဒါကြောင့်မင်းတို့လုပ်စရာရှိရင်ပြproblemနာမရှိဘူး ရောက်ရှိကြောင်းစာရင်းသွင်းခြင်း သို့မဟုတ် ထွက်ခွာသည် နံနက်စောစော။
ကိုပင်ဟေဂင်ရှိစျေးပေါသောဟိုတယ်များကို ၀ ယ်ယူသူများအတွက်ကောင်းမွန်သော ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူရွေးချယ်စရာတစ်ခု။ CityHub Copenhagen သည်ခေတ်မီဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကိုယ်ပိုင်အာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အထွက်ဆိုလိုတာပါ သူတို့ဖောက်သည်တွေကိုကမ်းလှမ်းတယ်။ ကိုပင်ဟေဂင်ဟိုတယ်အတော်များများတွင်သူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်အတွက်နေ့စဉ်တီထွင်မှုနည်းပညာများပါဝင်သည်။ အချို့သည် guests ည့်သည်များအားတက်ဘလက်များကိုချေးငှားပေးပြီးယင်းတို့ကိုအခန်းအမျိုးအစားများမှတစ်ဆင့်အခန်းအတွင်းရှိအလင်းများကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ပေးသည်။
သို့သော် CityHub ကိုပင်ဟေဂင်အဆိုပြုချက်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ နည်းပညာအားဖြင့်သူတို့သည်ဝန်ဆောင်မှုများကိုဟိုတယ်နံရံများထက် ကျော်လွန်၍ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည် mob ည့်သည်များသည်မိုဘိုင်းဖုန်းများပေါ်တွင်အခမဲ့တပ်ဆင်နိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ကြသည်။ ဤလျှောက်လွှာမှဖောက်သည်များသည်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများနှင့်စကားပြောနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မြို့၏လမ်းများအားလုံးကိုရှာဖွေစဉ်အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံဥာဏ်များတောင်းခံရန်အလွန်ကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အခန်းများ၌သင် Bluetooth မှတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည့်စတီရီယိုတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်တန်ဖိုးထားသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရီးဆောင်သေတ္တာ၌စပီကာများသယ်ဆောင်ခြင်းမရှိသည့်အပြင်ခရီးသွားသည့်အခါပုံမှန်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ပုံမှန်သတိမထားမိသောအရာများဖြစ်သည်။
ဟိုတယ်ကအလယ်ဗဟိုနဲ့အရမ်းကောင်းတယ် Frederiksberg Alléမက်ထရိုဘူတာရုံသည်မီတာ ၅၅၀ အကွာတွင်သာရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အဓိကခရီးသွား interest ည့်စိတ်ဝင်စားမှုရှိသောနေရာများသို့ရောက်ရန်သင်သည်ပြhaveနာမရှိပါ။ သို့သော်သင်သည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုမယူလိုပါကကိုပင်ဟေဂင်သည်စက်ဘီး၏မြို့ဖြစ်သည်ကိုသတိရပါ၊ ၎င်းတို့အားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုငှားရမ်းနိုင်သည်။ နည်းနည်း pedaling အားဖြင့်, CityHub ကိုပင်ဟေဂင်မှသင်ဆယ်မိနစ်ထက်နည်းအတွင်းဒိန်းမတ်အမျိုးသားပြတိုက်သို့မဟုတ် Frederiksberg Have ဥယျာဉ်ကဲ့သို့သောကိုယ်စားလှယ်နေရာများသို့ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ကိုပင်ဟေဂင်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုတွင်အိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိမှုအားလုံး။ တစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့ခရီးသွားတဲ့အခါစားသောက်ဆိုင်ကနေစားသောက်ဆိုင်အထိတစ်နေကုန်စားရတာမျိုးမခံစားရဘူး၊ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကငွေအများကြီးမသုံးချင်ဘူး၊ ကိုပင်ဟေဂင်လိုမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာရှိတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာကိုချက်ပြုတ်ရန်ရွေးချယ်ချင်သည်သို့မဟုတ်ရိုးရာဟိုတယ်အခန်းကမ်းလှမ်းမှုများထက်နေရာများပိုလိုချင်လျှင်၊ Aperon Apartment Hotel သည်သင့်အတွက်အလွန်ကောင်းသောရွေးချယ်စရာဖြစ်သည်။ သိသာထင်ရှားသည့်ဒိန်းမတ်စတိုင်နှင့်အတူ၎င်း၏သေးငယ်တဲ့တိုက်ခန်းများတွင်သင်ပျော်မွေ့နိုင်သည် ဟိုတယ်၏အားသာချက်များကိုမဆုံးရှုံးဘဲအိမ်၏သက်သောင့်သက်သာရှိသမျှ.
ထို့ကြောင့်မီးဖိုချောင်ရှိသည် ခေတ်မီအပြည့်အဝတပ်ဆင်ထားသည် မြို့တွင်း၌သင်၏စွန့်စားခန်းများပြီးနောက်သင်အနားယူနိုင်သည့်ကျယ်ဝန်းသည့် living ည့်ခန်းနှင့်အတူ။ အကယ်၍ သင်သည်ကလေးများနှင့်အတူခရီးသွားနေပြီးအခန်းတစ်ခန်းတည်း၌အတူတူအတူတူအတူတူအိပ်မည်ဟူသောစိတ်ကူးသည်သင့်အတွက်အလွန်စိတ်မ ၀ င်စားပါက၎င်းသည်အလွန်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်တိုက်ခန်းများ၏အပြင်အဆင်သည်ကြီးလှ၏။ ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းများသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးပျူငှါနွေးထွေးသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောသဘာဝအလင်းကိုခံစားနိုင်သည့်ပြတင်းပေါက်များနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။
တည်နေရာအရ Aperon တိုက်ခန်းဟိုတယ် ကိုပင်ဟေဂင်၏ဗဟိုဆုံး Indre By ခရိုင်တွင်တည်ရှိသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်ဖျားမှာစိတ်ဝင်စားစရာနေရာအားလုံးနီးပါးရှိလိမ့်မယ်။ ကျော်ကြားသော Rosenborg ရဲတိုက်သည်မီတာ ၇၀၀ သာဝေး။ Nørreportဘူတာသို့ ၅ မိနစ်တောင်မကြာလျှင်လမ်းလျှောက်နိုင်သည်။
The Wakeup ကိုပင်ဟေဂင် - Bernstorffsgade
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအပေါ်ကိုပင်ဟေဂင်မှခရီးသွားသူတို့အဘို့စံပြနေရာထိုင်ခင်း။ The Wakeup ကိုပင်ဟေဂင် - Bernstorffsgade ၌တည်ရှိ၏ မြို့လယ်ခေါင် အဆိုပါKøbenhavnခရိုင်၌တည်၏။ ၎င်း၏တည်နေရာအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည်ခရီးသွား great ည့်သည်များစိတ်ဝင်စားသည့်နေရာများနှင့်အလွန်နီးကပ်သည် ဘဝအပြည့်အဝရိယာ။ ဟိုတယ်ဝန်းကျင်၌မရေမတွက်နိုင်သောအရက်ဆိုင်များ၊ အရက်ဆိုင်များနှင့်စားသောက်ဆိုင်များကိုသင်တွေ့ရလိမ့်မည်၊ သောက်ရန်နှင့်ဒိန်းမတ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်၏လေထုကိုစိုစွတ်စေသည်။
သို့သော်၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကိုပင်ဟေဂင်၌အကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၆ ခုစာရင်းတွင်ဤဟိုတယ်သည်၎င်း၏တည်နေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပါ။ The Wakeup ကိုပင်ဟေဂင် - Beချစ်သူ တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် စီးပွားရေးအရမြို့တော်သို့ခရီးသွားသူများအတွက်စံပြနေရာထိုင်ခင်း။ ၎င်း၏နေရာများသည်ပြတင်းပေါက်ကြီးများနှင့်ကြီးမားသောပြတင်းပေါက်များဖြင့်ဝန်းရံထားပြီးသင့်အားပျော်ရွှင်မှုခံစားစေသည် မြို့၏ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာအမြင်များ။ ဤဒေသများတွင်အလုပ်အတွက်အထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောနေရာများရှိသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး ရှိသည် bussines စင်တာ, အခမဲ့အသုံးပြုရန်အတွက်ကွန်ပျူတာများနှင့်အတူတစ် ဦး အဆင်ပြေအလုပ်လုပ်ရန် enabled နေရာများအများအပြားကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။
အခန်းများသည်ခေတ်မီပြီးအလွန်သပ်ရပ်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်သူတို့မကြီးသေးသော်လည်းအရွယ်အစားလုံလောက်သည်။ မင်းကအပန်းဖြေဖို့မြို့မှာမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့မှာစားပွဲသေးသေးလေးရှိတယ်။ ဒါ့အပြင်ကိုပင်ဟေဂင်ဆိပ်ကမ်းနဲ့နီးကပ်လာတဲ့အတွက်ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနှင့်အခန်းများရှိသည်။ နိုးလာသောအခါမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းကိုမည်သူခံစားချင်မည်နည်း။
ဒီဇိုင်းနှင့်ကိုပင်ဟေဂင်၏မြို့တော်ကို ၃၆၀ ºမြင်ကွင်း၊ အထူးအခါသမယများအတွက်အကောင်းဆုံးစံပြဟိုတယ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ကိုပင်ဟေဂင်၌အကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၆ ခုစာရင်းကိုပိတ်ရန်ထိုက်တန်သည့်နေရာထိုင်ခင်းမှာBrøchner Hotels မှဟိုတယ် Ottilia ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အခြားသူများကဲ့သို့စျေးပေါ။ အလယ်အလတ်မကျသည်မှာမှန်သော်လည်း၎င်းသည်နှစ်သက်ဖွယ်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အထူးအခါသမယများအတွက်သင့်လျော်သော။
ဗေဒ, ဟိုတယ်အံ့သြစရာပါပဲ။ ၎င်းကိုနှစ်ပေါင်း ၁၆၀ ကျော်အထိဒိန်းမတ်နိုင်ငံတွင်အကျော်ကြားဆုံးဘီယာစက်ရုံတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်, အ Carlsberg ။ စက်ရုံတည်ဆောက်ပုံအဟောင်းသည်ကြော့ရှင်းသောခေတ်မီဒီဇိုင်းများနှင့်ရောနှောပေါင်းစပ်ထားသည်။ စက်ရုံ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသည်။ မျက်နှာစာတွင်ပင်ဘီယာစက်ရုံတည်နေတုန်းနံရံမှပေါ်ထွက်လာသောရွှေဒိုင်းပေါင်း ၆၄ ခု၏ဂုဏ်အသရေအတွက်သူတို့ကအံ့ဖွယ်မြို့ပတ်ရထားပြတင်းပေါက်အချို့ကိုတင်ထားလိုက်သည်။
ဟိုတယ်သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုပေးသည်။ စက်ဘီးငှားရမ်းခြင်း၊ spa၊ အားကစားရုံ၊ ဘားနှင့်စားသောက်ဆိုင်ပင်။ ထို့အပြင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဟိုတယ်ကိုစီစဉ်သည် ပျော်ရွှင်နာရီ သောစပျစ်ရည်ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည် its ည့်သည်များအားလုံးအတွက်၊ ရှည်လျားသောရှုခင်းများကြည့်ရှုပြီးအပန်းဖြေရန်နှင့်အနားယူရန်အတွက်အကောင်းဆုံးသောပွဲဖြစ်သည်။
သံသယမရှိဘဲ, စားသောက်ဆိုင်ဟိုတယ်ရဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အ ဦး ၏အမြင့်ဆုံးအထပ်တွင်တည်ရှိသည် ကိုပင်ဟေဂင်၏အထင်ရှားဆုံးအမြင်များထဲကတစ်ခုရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်သူတို့၏စားပွဲများမှဒိန်းမတ်နိုင်ငံမြို့တော်ကို ၃၆၀ ºမြင်ကွင်းကိုကြည့်ရှုခံစားရင်းအရသာရှိသည့်အီတလီအစားအစာကိုသင်မြည်းကြည့်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ယေဘုယျ » ကိုပင်ဟေဂင်ရှိအကောင်းဆုံးဟိုတယ် ၆ လုံး